Taliye gaar ah oo loo magacaabay ciidamada Komaandoosta Soomaaliya – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Muqdisho – Mareeg.com: Ciidamada dhawaan la unkay ee Komaandoosta Soomaaliya ayaa loo magacaabay taliye gaar ah, iyadoo shalay ciidamadaas Mareykanku siiyey gaadiid iyo hub rasaas ku jirtay.
Col. Xasan Maxamed Yuusf ayaa loo magacaabay inuu noqdo taliyaha cusub ee ururka Kumaandooska ee ciidamada Xoogga dalka Soomaaliyeed, wuxuuna xusay in ciidamada Komandoska ay qabaan tababar wanaagsan.
Gen. Daahir Aadan Cilmi oo ah taliyaha ciidanka Xooga Dadlka Soomaaliya ayaa tilmaamay in ururka Kumaandooska ee ciidanka xoogga dalka ay u dhanyihiin tababar iyo qalab intaba wuxuuna ku gooddiyay in ciidamadaasi ay dalka oo dhan ka sari doonaan Alshabaab sida uu yiri.
Gen. Daahir ayaa tilmaamay iney muddo ku guda jireen raadinta taliyaha cusub ee loo magacaabay hogaanka ciidamada Komaandoosta Soomaaliya.
Shalay ayaa xaflad lagu qabtay xerada tababarka Jazeera waxaa saraakiil iyo wakiilo ka socday dalka Mareykanka taliska milateriga Soomaaliya ula wareejiyeen gaadiid ciidan oo tiradoodu gaareysay 15 iyo qalab kale.
Golaha Amaanka oo Soomaaliya u kordhiyey fududeynta xayiraadda hubka